Hilda Rasinjo “Nampiseho ny fetrany ny CENI”
Filoha lefitra vaovaon'ny CENI "Tsy olana na tsy feno aza ny mpifidy vaventy"
Tontosa omaly 21 septambra teny amin'ny Fitsarana Tampony Anosy ny fihanihanan'ny Filoha lefitry Vaovaon'ny CENI Atoa Benaivo Andrianaly Narcisse.
Dosie mafampana Mailo ny filohan’ny HCC
Nalaina hiresaka sy tsy namaly ny mpanao gazety ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) Atoa Jean Eric Rakotoarisoa omaly momba ny raharaham-pifidianana loholona sy momba ireo fitoriana tafapetraka eny amin’ny HCC Ambohidahy.
Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy “Anjaran’ny fanjakana ny manatontosa ny fanonerana”
Nisokatra omaly tetsy Ampefiloha ny andiany faha 30 amin’ny fivoriamben’ny filankevitry ny fampihavanana malagasy. Isan’ny votoatin-dresaka tao
Depiote Leva Naiditra am-ponja ao Morondava indray
Naiditra am-ponja vonjimaika ao Morondava indray, raha ny fampitam-baovao voaray, ny solombavambahoaka teo aloha, Ludovic Raveloson, fantatry ny maro amin’ny hoe depiote Leva.
Vonison Andrianjato “Miha tsy marin-toerana hatrany ny fitondrana”
Mifanenjana amin’ny heveriny fa rariny sy hitsiny ny mpitondra sy ny mpanohitra. Miha mifoha ireo toe-javatra maneho ny tsy fahamarinan-toeran’ny fitondrana Rajoelina.
Antoko RCR Tsy manaiky intsony ny fivangongoam-pitantanana
Ny fanombohana ny fanovana, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika RCR na famondronana ny olompirenena tomponandraikitra, tarihin’ny filohany, Laza Razafiarison,
Alain Ratsimbazafy “Tokony ampiana aza ny isan’ny loholona”
Niainga tany amin’ilay fandaniana ny hitsivolana noraisin’ny filoham-pirenena nandalo teo anivon’ny antenimiera roa tonta ary nananganana ilay vaomiera ikambanana isasahana isika, hoy ny solombavambahoaka, Alain Ratsimbazafy.
“Taorian` ireny fanambarana nataon` ny CENI momba ireo anarana miverina in-droa dia nihozongozona ny fahamarinan-toeran` ny mpitondra amin` izao.
Efa ambany ny tahan` ny fandraisana anjara tamin` ny fifidianana kanefa dia mbola nisy ireny fanambarana ireny indray” hoy Hilda Rasinjo, mpanolontsainan` ny tanàna voafidy tamin`ny vondrona politika KOMBA. Mazava ho azy, mila jerena raha nifidy daholo ireo “doublon” iray tapitrisa mahery ireo. Aorian` izay kosa vao afaka mampiseho ny fisian` ny hala-bato goavana. Tsy mila hiverenena, hoy izy, ny hoe “miala ny filoha” satria efa nekena ny vokam-pifidianana. Raha ny fijeriny hatrany dia nampiseho ny fetrany ny CENI satria ity vaomieram-pirenena ity no nanambara fa talohan`ny 2018 no niseho ireny lisitra ireny kanefa tsy nisy fanavaozana natao. Inona marina no ilàna ny CENI? hoy ihany izy. Tsy hanan`ny fitondrana fahefana ny fikarakarana fifidianana ary tsy misy tomponandraikitra intsony ny fifidianana. Tsy misy azo hitenenana intsony amin`ny tsy fetezana. Matoa napetraka ireny rantsana izay lazaina mahaleotena ireny dia ny mba hisian`ny tsara tantana eo anivon` ny sehatra iray izay tiana apetraka. Nahoana ny fanjakana no tsy afaka miantoka fifidianana tsara tantana? Tsara kokoa raha ny fanjakana no misahana ny valiny farany. Antony, misy tompon’andraikitra rehefa misy tsy fahatomombanana toy ny famoahana CIN na koa andraikitry ny sefom-pokontany… Niainantsika ny vokatry ny tsy fahatomombanana ka manana efa taona hanomanana fifidianana filoham-pirenena isika ahafana mandinika sy mijery ireo fomba hanarenana ny lisi-pifidianana sy hamerenana ny fahatokisan` ny olona ao anatin` izany, hoy hatrany ny fanazavany.